Ra’isul Wasaare Kheyre oo safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxaya dalka dibadiisa – Balcad.com Teyteyleey
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan uu u baxo safarkiisii ugu horeysay uu ku tagayo dalka dibadiisa tan iyo markii xilkan loo magacaabay.
Sida aan Wararka ku heleyno Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa u ambo baxaya dalka Qadar , waxa uuna ka qeyb You can significantly save on your Precose purchase, if you know where you can buy a cheap one! Buy it here only for 0.73 USD! galayaa Ra’isul Wasaaraha oo lagu casuumay shirka Madasha Doxa Forum .
Shirkan waxaa ka qeyb galaya Hay’ado Caalami ah, Deeq bixiyaal iyo siyaasiyiin dunida caan ka ah, waxaana shirkan lagu wadaa in uu furmo 14-ka May , waxaana shirkan furi doona Wasiirka Arrimaha Dibadda Qatar Sheekh Mohammed Bin Abdulrahman Al-Thani.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya iyo xubno la socda ayaa lagu wadaa in 13-ka bishan ka dhoofaan magaalada Muqdisho si ay Shirka Doha uga qeyb galaan, waxaana Ra’isul Wasaaraha inta uu joogo Qadar la filayaa in uu la kulmo Madax kala duwan, Hay’ado iyo Deeq bixiyaal caalami ah.
Safarka uu dalka Qadar ku tagayo Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay uu dalka uga baxo, waxaana Ra’isul Wasaarahan kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay safarada dhinaca dibada ah.